Iindaba - I-COVID 19 yoVavanyo oluKhawulezayo lwe-Antigen lubhaliswe ngempumelelo eJamani
I-Immunobio COVID 19 i-Antigen Rapid Test Kit ibhaliswe ngempumelelo eJamani. Iziphumo zovavanyo zobhaliso zibonisa ukuba iimveliso zethu zisebenza ngokugqwesileyo kwaye zamkelwe kakhulu ngabathengi
Ubhubhane omtsha (i-COVID 2019) uqhume ngasekupheleni kuka-2019 waze watshabalalisa i-China ekuqaleni kowama-2020. Iqela le-R & D liphuhlise ngempumelelo i-COVID 2019 IgG / IgM yokuvavanya ngokukhawuleza kwikhithi ekuqaleni kukaFebruwari 2020, kwaye ngoSeptemba 2020, iqela le-R & D liphumelele ngempumelelo i-2019-ncov antigen test test kit.
Iqela lethu le-R & D lifumanise ukuba uvavanyo lwe-antigen ka-2019-ncov kwimarike noe kulula kakhulu ukuvelisa into engeyonyani xa isetyenziswa ngamathe swab. Ukoyisa le ngxaki, iinjineli zenze inani elikhulu lokulinga okwahlukileyo kwikhithi yovavanyo ye-AG kwintengiso. Ngemizamo engagungqiyo, iqela le-R & d ekugqibeleni liphuhlise eyethu i-2019-ncov antigen kit yokuvavanya, engagwetyeli kuvavanyo lweempumlo, kodwa ikwasebenza kuvavanyo lweSaliva. Senze uvavanyo lweSaliva ngamawaka ngaphambi kokubeka ikiti kwintengiso, akukho namnye owalinga ukungaphumeleli.
Umthengi wethu waseJamani uMnu. MXX ufundile ukuba i-IMMUNOBIO COVID 19 iAntigen test kit ingasetyenziselwa ukufumanisa amathe, wakhawuleza wagqiba ekubeni ayibhalise le mveliso eJamani ayithengise. Sibonelele ngesampulu yovavanyo lwesampulu yovavanyo lobhaliso, kwaye iziphumo zobhaliso zibonisa ukuba ubuntununtunu kunye nokucaciswa kwe-regennt reagent yethu intle kakhulu. Isampulu yokufumanisa ubuntununtunu yi-100%, kwaye ubukhulu bayo yi-95.6%.
Okwangoku, imveliso ibhaliswe ngempumelelo kwaye ithengiswa eJamani, kwaye ibhaliswe ngempumelelo kwi-European Union.